Samachar Batika || News from Nepal » ईन्गेजमेन्टको अघिल्लो दिन पूर्व प्रेमीले फोटो र म्यासेज फैलाएपछि स्वेताले गरिन देहत्याग !
विराटनगर । सोमबार इन्गेजमेन्टको तयारी विराटनगरमा भईरहेको थियो । उदयपुर बेलका नगरपालिका–२ निवासी २४ वर्षीया श्वेता पोखरेलले आइतबार साँझ झु ण्डिएर देहत्याग गरिन् । उनको देहत्याग नभएर देहत्याग दुरुत्साहन भएको भन्दै परिवारले किटानी जाहेरी दिएपछि घटनाको भित्री पाटो बाहिर आएको छ । मृतककी बहिनी सरीता पोखरेलको जाहेरीका आधारमा घ’टना घ’टाउन बा’ध्य पार्ने आ’रोपमा प्रहरीले सुन्दरहरैंचा–१० का सबिन पराजुलीलाई नियन्त्रणमा लिईसकेको छ ।
दिदीले केहि हुँदैन, चुप लागेर विवाहको तयारीमा जुट्न भनेकी थिइन् । तर, श्वेताले म्यासेजमा भनिन्–मेरो जीवनमा के आइलाग्यो, मर्छु क्यारे !
इन्गेजमेन्टको अघिल्लो दिनसम्म आउँदा श्वेतामाथि पनि सबिनको असंख्यक द’वाव परिसकेको मृतकका परिवारले बताएका छन् । निकट भविष्यमै श्रीमान् बन्ने केटासम्म पनि फोटोहरु पुगेपछि श्वेताले यूएईमा काम गर्दै गरेकी आफ्नी दिदीलाई समेत जानकारी गराएकी थिइन् । तर, दिदीले केहि हुँदैन, चुप लागेर विवाहको तयारीमा जुट्न भनेकी थिइन् । तर, श्वेताले म्यासेजमा भनिन्–मेरो जीवनमा के आइलाग्यो, मर्छु क्यारे !
विवाह तय गरेको दोस्रो केटाले समेत श्वेतालाई भनेका थिए–तिम्रो पहिलो प्रेमीसँग यतिधेरै माया साटिईसकेको रहेछ, अब विवाह नगरौं ! त्यसले श्वेतालाई देहत्याग गर्नुपर्ने निर्णयमा पुग्नु बाहेक विकल्प रहेन । कारण सबिन बनेपछि उनले आईतबार साँझ ६ बजे अन्तिम बाटो रोज्न बा’ध्य भईन् ।
मोरङ प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईले परिवारले दिइएको जाहेरीका आधारमा आरोपित पराजुलीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अ’नुसन्धान भईरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले घ’टनामा बहुपक्षीय अ’नुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
मृ’तक श्वेताकी बहिनी सरीता पोखरेलले दिइएको जाहेरीमा सबिनसँगको प्रेम सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध विवाहमाा बाँधिन नसकेपछि दोस्रो विवाह तय र त्यसपछि पुनः सबिनले दिइएको द’वावको विषयमा उल्लेख गरेकी छिन् । मृतकको पोष्टमार्टमपछि परिवारले लास बुझेर दाहसंस्कार आजै गरिएको छ । श्रोत मिरमिरे अनलाइन
प्रकाशित मिति ९ असार २०७७, मंगलवार ०७:३५